Author Topic: Sidee loo baaraa xanuunnada maskaxda? (Read 13943 times)
« on: March 08, 2008, 10:44:19 PM »
Khatar kale waxay ka iman kartaa markii uu baaritaanku noqdo calaamad la iskaga dhejiyo qofka, tusaale ahaan, intii qofka loo arki lahaa waalid, makaaniko, qoraa ama arday qaba xanuun maskaxeed, waxa laga yaabaa in qofka loo arko "wax waalan"? sidii oo baaaritaankaasi uu yahay gabogabo kama danbays ah.
Re: Sidee loo baaraa xanuunnada maskaxda?
« Reply #1 on: March 08, 2008, 11:41:23 PM »
aad bad ugu mahadsantahay somalidoctor informationkaas aadka uqimaha badanaad ka bixisay mawduucas
aniga waxan ahay laboratorist , waxana rabay inan ku waydiyo ? shaybaristayasha somalia jogo baa qaar igu yidhi waxad no soo radisa qalab lagu baadho curiyayaasha chemical ka ah mid uu ku jiro curiyaha LITHIUM ? oo ay dhaheen dhakhatiirta psychiatristiga ah ayaa badana u so dira in laga baadho qofka maskaxda ka xanunsan ? marka lithium iyo cudurkan maxay clinical significane ay wadagaan ? hadii aad igu dhaantid cilmigas aan kaa faaiideyste ...
aad ban ku salamaya s.c wr wb.
« Reply #2 on: March 10, 2008, 04:00:01 PM »
Walaal Toldo waa su'aal aad u fiican.
Lithium Carbonate waxaa loo isticmaalaa daawo ahaan, waxaana lagu daaweeyaa cudurka "Niyad Jabka" iyo "Niyad Kaca" oo isla jira loona wada yaqaano (Bipolar disorder).
Maadaama daawadani ay tahay daawadii ugu horeysay ee la soo saaro uguna waxtar fiican ee lagu dajiyo niyadda (Mood Stabilizer) waxay leedahay mushkilad halis ah oo hadii aan laga fiirsan qofka si dhakhso ah ku dili karto.
Markii laga hadlayo cilmiga daawada waxaa jiro wax loo yaqaano (Therapeutic Index) oo ah: farqiga u dhaxeeya qadarka daawada lagu bogsoodo iyo qadarka daawada ay helis ku noqon karto qofka.
Lithium waxa uu ka mid yahay daawooyinka farqi aad u yar u dhaxeeyo qadarka qof ku daawoobi karo iyo qadarka qof uu ku dili karo (Very Narrow Therapeutic Index), taasoo keensanaysa qofkii daawadaan isticmaalaya in si joogto ah loo baaro, hadii aysan jirin baaritaan noocaan ahne aan qofkaba la siin daawadaan helista ay leedahay awgeed.
Sidaa darteed qofka qaadanaya daawadaan waa inay sida saxda ah u dhaxeysaa 0.4 to 0.8 mmol, taasoo ah farqi aad u yar lana iska ilaaliyaa inay ka badato 0.8 - 1mmol.
Waxaan filayaa inaad sidan ula jeeday su'aashaada.
« Reply #3 on: March 11, 2008, 03:45:38 PM »
Aaad baad u mahadsantahay somalidoc , intii aan doonayayna si fiican ban u fahmay ? iyo qiyaasta maadada lithiumka la yidhaah sababta loogu bahanyahay in la baadho bay ahayd su'ashayda jawaab fican oo kaafi ahna wad ka bixisay thank u again somalido.
Views: 13114 February 22, 2010, 12:47:32 PM
Views: 8470 September 09, 2015, 01:14:18 PM
Views: 26925 December 21, 2009, 07:54:40 PM
Views: 14940 March 10, 2011, 06:10:21 PM
Views: 10398 December 05, 2011, 11:25:44 PM